'IGehena: Apho kuPhila khona ukuFa' -Imiboniso bhanyabhanya eIndie eyoyikisayo yeMpawu eziBalulekileyo - iHorror
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo 'IGehena: Apho kuPhila khona ukuFa' -Imiboniso bhanyabhanya eIndie yeHorror sisixhobo esisebenzayo
'IGehena: Apho kuPhila khona ukuFa' -Imiboniso bhanyabhanya eIndie yeHorror sisixhobo esisebenzayo
by admin Matshi 26, 2015
ibhalwe ngu admin Matshi 26, 2015
Kuya kufuneka uyibone le! Ngeli xesha ndandibulala ixesha ndisenza umqulu wam weveki yeKickstarter (KS) amehlo am ayekisa kwangoko kwiprojekthi ebizwa IGEHENNA: Apho kuhlala khona abantu abaswelekileyo. Mhlawumbi yayingumfanekiso wesoyikiso wesidalwa esine-humanoid, okanye amagama asetyenzisiweyo kwizitatimende zokuvula ezibambe umdla wam, andiqinisekanga. Yintoni eyayibonakala kum ukusukela, ayisiyonjongo yakho yesiqhelo ye-KS.
Apha kwiiofisi ze-Horror.com, iqela liya kuxoxa ngeeprojekthi ezintsha ezixhaswa ngemali ngabantu mihla le. Ngokukodwa ngenxa yento yokuba uloyiko luhlobo olubalulekileyo ngaphakathi kwezi sangqa kwaye emva kwayo yonke into basinika iimovie ezinje I-Babadook. Ngelishwa, zininzi duds kuluntu ekuthethwa ngalo olungaze luphumelele. Kodwa ndiyakholelwa IGEHENNA: Apho kuhlala khona abantu abaswelekileyo izakwenza uphawu kwihlabathi loyikekayo. Amashishini amakhulu aqhelekileyo angazange akhathazeke malunga nale ndoda incinci kufuneka anike ingqalelo kule ndibano izayo kunye nabenzi bemiboniso bhanyabhanya.
Iingqondo ezisemva kwayo yonke nguHiroshi Katagiri (umfanekiso ongentla) kwaye uyintsomi kwiziphumo zehlabathi; Ukudibanisa ukukrola, ukwenza izithambiso, kunye neziphumo ezisesikrinini zakudala ukuze ufumane isiphumo "somthengisi kunokwenyani". U-Katagiri, esebenze njengempembelelo yomntu okhethekileyo kwiimovie ezinje nge Imidlalo yokulamba kwaye Ikhabhathi emahlathini (jonga umfanekiso ongentla), kwaye ephulula iingqiniba ngeentsomi ezinje ngoSteven Spielberg, uziva ngokucacileyo ukuba lixesha lakhe lokuthatha isihlalo kwaye abonise oontanga bakhe ukuba kwenziwa njani. Jonga eyakhe IMDB Apha.
Ukufunda ngakumbi kulwazi lweprojekthi kwi-KS, bendonwabile yenye into encinci. Kucacile IGEHENNA: Apho kuhlala khona abantu abaswelekileyo Ngaba ngumdlalo bhanyabhanya owoyikisayo oneziphumo ezibonakalayo ezifanelekileyo- oko kuthetha ukuba izidalwa zohlobo oluthile, kwaye ngubani olunge ngakumbi ukubonakalisa iimpawu zesidalwa esinje? Akukho namnye ngaphandle UDoug Jones! Ndingumlandeli omkhulu womsebenzi kaDoug kwaye ukuba awazi ukuba ndibhekisa kubani na, ziintloni kuwe, njengoko uqinisekile ukuba isihogo besingasibona isidalwa asidlalileyo. Ungene Pan's Labyrinth, Hellboy, Amanqaku amane amnandi, Amadoda aMnyama 2, kwaye uluhlu luyaqhubeka.
(Umfanekiso ongasentla nguMike Elizalde, umnini weSpectral Motion, osebenza kuJones njengoMdala weCreepy, njengoko uHiroshi ejonge. UMike noSpectral Motion bobabini bazele ngokupheleleyo kwifilimu.)
Okokugqibela, iyelenqe lale filimu lizwakala liyintsusa, hayi ukujikeleza into esele siyibonile. Ukuba ujonga amaphepha e-bio kaHiroshi, uyabambelela kwinto eyenza imovie elungileyo kwaye ngokubaluleke kakhulu yintoni eyenza yoyike. Kwaye ucacile kwinqanaba lokuba AKUFUNI ukugqithisa okungaphezulu kunye nobukrwada ukoyikisa abantu, endaweni yoko, untywilisela abaphulaphuli bakho ebalini ngokusetyenziswa kweendlela zesiko; izoyikiso ziya kuvela kumandla akhe okuzisa izidalwa zakhe ebomini ngeziphumo ezibonakalayo, hayi ezekhompyuter.
Ngokwam, emva kokufunda ulwazi kwiphepha leKickstarter ndonwabile ukubona into eyenziweyo kule projekthi. Ngamakhulu ambalwa abaxhasi esele ndinayo ngokungathandabuzekiyo iya kufikelela kwinjongo yayo. Ukuba ungathanda ukuba yinxalenye kaHiroshi kunye nokudalwa kweqela, yisa iesile lakho kwi Iphepha le-KS kunye neprojekthi. Usenokufumana umfanekiso oqingqiweyo wentloko yakho owenziwe buqu nguHiroshi ngokwakhe.
UDaniel HegartyUDoug JonesIGEHENNAUHiroshi Katagiri
ULwesihlanu ozayo umhla we-13 ufumana uHannibal uNick Antosca njengombhali
Amaxwebhu aVavanya iincwadi zaMandulo 'Amabali awoyikisayo ukuwathetha ebumnyameni'